Fiaingan’ny toekarena Tompon’andraikitra voalohany ny filoha, hoy ny FMI
Tamin’ny zoma 15 febroary farany teo no nandalo indray ny iraky ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI) izay tarihin’i Marshall mills nanao ny tomban’ezaka andiany fahefatra nataon’i Madagasikara amin’ny fandaharan’asa Facilité Elargie de Crédit (FEC)
Mpandraharaha Malagasy Sahirana manoloana ny vahiny
Migalabona tanteraka ny vahiny eto Madagasikara indrindra ireo mpandraharaha. Ny vahiny dia manana anjara goavana na eo amin`ny tontolon’ny fitantanana sy fandraharana ny fiainana andavanandro eto Madagasikara ary tena ao anatin’ny andavanandrom-piainan’ny Malagasy mihitsy. Hita amin`ny sehatra rehetra toy ny angovo, serasera, fitaterana, solika …
Antony ny tsy faneken’izy ireo hiara-kiasa amin’ny mpiara-miombon’antoka Compagnie Vidzar noho ny tsy fahombiazana amin’ny fanarenana ny orinasa SIRAMA. Nanambara izy ireo fa ny kitrano an-trano nataon’ny fitondrana HVM tamin’io mpiara-miombon’antoka io no fositra nahatonga ny orinasa lasa mitsipozipozy hatramin’izao. Tofoka tanteraka ireto mpiasa mitolona ireo ary nilaza mihitsy fa fanapotehana no atao fa tsy fanarenana. Manoloana izany indrindra dia antso avo no ataon’ireo mpiasa ary mangataka ny fidinana ifotony ataon’ny fanjakana. Nahavelom-bolo hoy izy ireo ny hafatra napetraky ny filoham-pirenena vaovao nandritra ny fianianana nataony ny amin’ny ady amin’ny kolikoly. Araka izany dia mangataka ny hisian’ny tolo-bidy (appel d’offre) mangarahara ialàna amin’ny kolikoly izy ireo satria izany ihany no ahafahana mampihodina indray ny orinasam-panjakana SIRAMA. Tokony hojerena akaiky ity raharaha ity satria asa fivelomana maro no voasaringotra ary misy fiantraikany lehibe amin’ny toekarena any an-toerana ny fihodinan’ny orinasa.